ukuhlolwa emhlabeni we-devops
none Beshesha Ukuhlolwa ku-DevOps World
Ukuhlolwa ku-DevOps World
IDevOps iyinhlanganisela yenqubo yokuThuthukiswa nokuSebenza yokuThuthukiswa kweSoftware nokulethwa.
Abahloli ababandakanyeka kumodeli yokulethwa kwe-DevOps baqala ukubuza imibuzo efana nale:
Kukutholaphi ukuhlolwa kwimodeli ye-DevOps?
Ukuhlola ne-QA ku-DevOps kuhluke kanjani kunokuhlolwa kumamodeli we-Agile ne-waterfall?
Njenge-QA, yimaphi amanye amakhono okulindeleke ukuthi ngiwazi?
Lokhu okuthunyelwe kuxoxa ngamathuluzi, amasu, kanye nemikhuba esiyidingayo ukuze sisebenzise ukuvivinya ngempumelelo emhlabeni we-DevOps, ukwamukela ukuzenzekelayo nokuhlolwa okuqhubekayo ku-DevOps.
I-QA nokuhlolwa ku-DevOps
Ukuhlola kuguquke kanjani kusuka empophomeni kuya kushesha ku-DevOps?
Imikhuba yokuhlola nokuqinisekisa ikhwalithi ibone ushintsho olukhulu kusuka ezinsukwini zempophoma, i-Agile manje neDevOps. Kumodeli yempophoma, ukuhlolwa kubonwe njengesigaba kumjikelezo wokuphila wesoftware. Abahloli nomzamo wokuhlola babethunyelwe kakhulu lapho abahloli babevame ukuba yingxenye yethimba lokuhlola futhi bevame ukuhlukana neqembu labathuthukisi.
Abahloli bangabanikazi be- isu lokuhlola futhi babonwa njengabalindisango bekhwalithi. Ukuhlola bekukwenziwa ngesandla futhi bekujwayele ukwenzeka ngemuva kokuthi isoftware ithuthukiswe ngokuphelele nangaphambi nje kokukhishelwa ekukhiqizweni.
Ngokufanayo, isoftware yayijwayele ukuthatha isikhathi eside ukuletha. Ithimba elisebenza ngokuhlukile belinomthwalo wokukhiphela isoftware ekukhiqizweni okwenzeka, njalo ezinyangeni ezimbalwa. Kwakungekho noma izinga eliphansi lokuxhumana / ukubambisana phakathi kwethimba le-Ops nethimba le-Dev.
Imodeli ye-Agile idale ushintsho endaweni yokuthuthukisa nokuhlola kanye nobuningi bokukhishwa. Isoftware yathuthukiswa ngokulandelana nangokwengeziwe. Iscrum, okuyindlela yokwenza imodeli yokulethwa kwe-Agile, ngokushesha yathandwa kakhulu.
Umzamo wentuthuko wahlehliselwa ochungechungeni lokuphindwaphindwa okufushane, imvamisa ehlala amasonto ama-2-4. I-iteration ngayinye izokwakha isoftware engathunyelwa ngokungeza izinto ezintsha noma ezithuthukisa ezikhona.
Abahloli baba yingxenye yethimba lezentuthuko futhi ukuhlolwa kwaba umsebenzi ofanayo nokwakhiwa kwesoftware, kunokuba isigaba ekupheleni kwe-SDLC. Umsebenzi wokuhlola waba yisibopho esabiwe futhi ikhwalithi yayiphethwe yithimba lezentuthuko.
Imodeli ye-Agile ifake imikhuba yokuthuthuka nokuhlola futhi yavula indlela yokulethwa okusheshayo kwesoftware, noma kunjalo, ukuthunyelwa uqobo ekukhiqizeni kwakusenziwa yiqembu elihlukile leTechOps.
Ngenkathi iqembu leTechOps lizoba nolwazi ngamaseva, amanethiwekhi, nokusatshalaliswa, bebejwayele ukungayinaki imininingwane yokukhishwa ngakunye. Impendulo ethimbeni lentuthuko ibihamba kancane. Uma ngabe isiphazamisi sasikhona ekukhishweni, ngokuvamile kungathatha amahora ambalwa ukuthi iqembu lokuthuthukisa lazi inkinga.
I-DevOps ithatha imodeli ye-Agile igxathu eliya phambili ngokusondeza imisebenzi yokukhishwa nokuthunyelwa kuleyo yentuthuko nokuhlolwa. Lokhu kusho ukuthi iqembu le-agile lilodwa libhekele ukuthuthukiswa, ukuhlolwa nokukhululwa kwesoftware abayidalayo.
Isu Lokuhlola le-DevOps
Ukuhlolwa ku-DevOps kufaka yonke intuthuko yesoftware nokulethwa kwempilo. Abahloli abasagxili ekuhlolweni okusebenzayo nasekuqinisekisweni kwesici.
Njengabahloli, kufanele futhi sibambe iqhaza ekuhlolweni kokusebenza, ekuhloleni ukusebenza, ekuhloleni okuyisisekelo kokuvikela, kanye nokukwazi ukuqapha nokuhlaziya idatha yokukhiqiza kanye namalogi.
UDan Ashby une- okuthunyelwe okuhle kakhulu mayelana nokuhlolwa ku-DevOps lapho echaza khona
Uyabona ukuthi kungani abantu belwa kanzima ukuqonda ukuthi ukuhlolwa kuvumelana kanjani nemodeli engakusho nakancane. Kimi, ukuhlolwa kufanelana nephoyinti ngalinye kule modeli.
Ngempela, ukuhlolwa kungenzeka futhi kufanele kwenzeke esigabeni ngasinye kumodeli ye-DevOps. Kuhlelo Okuthunyelwe kwe-Agile Test Strategy , Sichaze ukuthi ukuhlolwa kungena kanjani kumodeli ye-Agile.
Isu lokuhlola le-DevOps lingakudlulisa lokho ngokungeza izigaba ezilandelayo:
Ukuhlolwa okuzenzakalelayo nokuhlolwa okuqhubekayo ku-DevOps
Ukukhethwa kwamathuluzi nobuchwepheshe kubaluleke kakhulu kumodeli ye-DevOps. Ukukhethwa kwamathuluzi kuvumela ikhono lenhlangano lokuletha izinhlelo zokusebenza nezinsizakalo ngejubane eliphezulu.
Kukhona ukugcizelelwa okukhulu ekuhlolweni okuzenzakalelayo ku-DevOps njengoba sifuna ukwakha isiko lapho singacindezela khona ikhodi phansi amasistimu ngokushesha nangokuzethemba.
Kanye nokuhlolwa kokusebenza okuzenzakalelayo, kufanele futhi sibe nesethi yokuhlolwa kokusebenza kanye nokuhlolwa kokuphepha / ukuqina kwephayiphi lokulethwa.
Akunakushiwo ukuthi, ngaphambi kokukwazi ukusebenzisa noma yikuphi ukuhlolwa okungenhla okuzenzakalelayo, okokuqala nokubaluleke kakhulu ukwakha ipayipi elizenzekelayo lokwakha nokudiliva kuthuluzi elihlanganisayo le-Continuous Integration, njengeJenkins.
Ukuhlola ekukhiqizweni akusho ukwenza imibhalo yakho yokuhlola esebenzayo / yokusebenza kusistimu ebukhoma lapho abasebenzisi basebenzisa khona uhlelo lokusebenza.
Singaqala ngokuhlaziya ukuthambekela kwe-A / B noma ukuhlolwa kwe-multivariant. Futhi singaqapha amaseva nganoma yikuphi ukuziphatha okungajwayelekile, njengokuvuza kwenkumbulo, ukusetshenziswa okuphezulu kwe-CPU, njll.
Umthelela we-DevOps ekuhlolweni
Konke lokhu kushintshe kanjani indima yabahloli nokuhlolwa ku-DevOps?
Abahloli manje kulindeleke ukuthi okungenani babe nolwazi olulandelayo namakhono ukuze bakwazi ukwenza ngempumelelo imisebenzi yokuhlola
Ulwazi oluyisisekelo lokuxhumana
Isikripthi se-Basic Unix / Shell, isb. bash, python
Ukuhlanganisa okuqhubekayo / Ukulethwa okuqhubekayo isb. UJenkins,
Amathuluzi wokuhlola ukusebenza anjengeJMeter noma iGatling
Ilungele Ukuhlolwa Kokusebenza Nokuqina
Ulwazi lweziqukathi, iDocker, Kubernetes
Kufunwa amathuluzi wokuqapha afana ne-Splunk
Izinsizakalo zamafu, isb. I-AWS, i-Azure
ubuqotho bemininingwane kusho ukuthi imininingwane yile:
ungamemezela kanjani okuguqukayo ku-python
Isifundo seJava Generics - Yini iGenerics nokuthi Ungayisebenzisa Kanjani?
IPython Funda Bhala Ifayela le-CSV
Gatling - Ungawusindisa Kanjani Umzimba Wokuphendula
Izibonelo Zokulinda Ngokusobala, Ngokusobala nangokucacile zeWebDriver
Ukugenca Amaseva Wewebhu - Ukubuka konke
Ukuhlolwa Kokuhlola - Isiqondisi Esisheshayo
Ukubuka konke kwe-Identity and Access Management (IAM) kanye ne-Identity Provider (IdP)
Izinzuzo Nezinkinga Zokuzenzekelayo Zokuhlola
Isitatimende SQL Sokukhetha